2 JUNIPER Kudzidzisa Kosi Munhu Wese MuInhizha Inoda Kudzidza | ITS
2 JUNIPER Kudzidzira Mazano Munhu wese MuInzvimbo Yese Inoda Kudzidza
Juniper inofambisa kufambira mberi iyo inoita kuti ushamwari hukwanise kuratidzira, kutarisira nyaya, uye kubata kuzarura.
Juniper inobatanidzawo vanhu kuti vawirirane nemafungiro avo kumamiriro avo ose pamwe nekufema upenyu muupenyu hwavo. Iko ndiyo nzira iyo innovation uye munhu mumwe nomumwe vanosangana, uye zvinoguma zvipi zvingava zvechokwadi zvinoshamisa.
JUNIPER Kudzidzisa Maitiro Munhu Wose MuInzvimbo Yepanzvimbo Inoda Kudzidza
JUNIPER Kudzidzira Kosi & Chidziro ndechekutevera
Chinangwa JUNIPER JNCIS -SEC
Boka rakakosha yeJUNIPER JNCIS -SEC
Zviitiko zveJUNIPER JNCIS -SEC
Chinangwa JUNIPER JNCIA - JUNOS
Boka rakananga reJUNIPER JNCIA - JUNOS
Zviitiko zveJUNIPER JNCIA - JUNOS
Sangano, chinangwa chikuru chaJuniper ndechokushandura zvinhu zvose uye kusangana nevanhu vose. Senguva yebhizimisi, Juniper anoedza kune vamwe vanhu masangano anokosha emafashoni anokonzera mabasa avo, evoke kubvuma, uye vanobatana neboka rinonyanya kukosha munzira dzinova nemigumisiro chaiye muupenyu hwevanhu.
IJNCIS-SEC kana Juniper Networks Yakagadziriswa Specialist - Chikoro chekuchengetedza chinoda kupa pasi pasi mano ehutano hwekuchengetedza, sarudzo yavo nekutsvaga mumabhizimusi makuru. Iyi dzidzo yakarongwa kune masangano ekugadzirisa nyanzvi ane ruzivo uye pakati pekudzidzira mumugwagwa we Junos programming ye SRX Series gadgets.
Ita zvinoratidzirwa kutungamirira nekuchengeteka uye zviitiko zvezvino muwetaneti.
Ipa mufananidzo we SRX Series gadgets uye programming design.
Ita kuti purogiramu yakasununguka uye yakasikwa yakasikwa yakagadzirwa ne SRX Series gadgets.
Dzokorora, kuronga, uye kuvhara nzvimbo.
Dzokorora, kuronga, uye chekuchengetedza zvigadziriswa.
Dudzira, kuronga, uye screen screen firewall customer validation.
Ita zvinhu zvakasiyana-siyana zvehurongwa huri kurwisa.
Zvigadziriswe uye Zvirongwa zveSvondo zvinogadzirisa kuronga kurwisa.
Tsanangurira, ita, uye chinyorwa NAT, sezvakagadzirirwa pazvikamu zvekuchengetedza kweJunos.
Tsanangura chikonzero uye magetsi eI IP Security (IPsec) virtual system (Private VPNs).
Dzokorora uye svondo rakagadziriswa uye rakadzidziswa nePsec VPNs.
Shandisa nekuvandudza dhiyabhorosi yedhipatimendi resaina.
Ronga uye svondo reIndaneti nzira neyekuita mazano.
Kuratidzira, kuronga, uye kuvhara kwepamusoro kukwanise kushandiswa pasi pemakumbo.
Innovative Technology Solutions gives JNCIS Training in 9 areas in India - Mumbai, Chennai, Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Noida and Pune.
Dzidzo iyi inobatsira vatungamiri ve SRX Series gadgets. Ava vatungamiri vanobatanidza vashandisi vehurongwa, vatariri, vashandi vechikwata, uye vanobatana nehutori hupi.
Kufanirwa kunofanirwa kuve nekukosha kwehurongwa hutungamiri ruzivo uye kunzwisisa kweWorld Systems Interconnection (OSI) kuratidzira kuratidza uye sangano reTCP / IP rakatevera. Kufanirwa kunofanirwa kuendesawo kuChanganidziro cheJunos Operating System (IJOS) course & Junos Routing Essentials (JRE), kana kuti kuva nezviitiko zvakatarisana vasati vaenda kukirasi.
IJNCIA - Junos kudzidziswa kubva kuInnovative Technology Solution ichine chikwata chechikwata chechikamu chinotanga sekusungirirwa kwekudzikisa midzi yeJoos. Juniper Networks CertifiedAssociate inoratidza unyanzvi hwekwanisi hwekushanda naJunos OS, kuchinjana, kutungamirira uye kunakosha hurongwa hwehutungamiri hwehutano. Wana mukana wekutsvaga pamusoro pezvikamu zvinokosha zveJunos programming kuburikidza nekubudirira kunoratidzira uye mapurogiramu ebasa. Sarudza aptitude mukugadzirisa uye kutungamirirwa kweJunos OS uye gadget maitiro ayo.
Ita mabasa akasiyana-siyana munharaunda yeCI uye maitiro ekushanda
Reestablish Junos gadgets kumigadziriro yavo yekushanda yemiti
Paridza uye utarisire kurongedza interfaces
Ita mabasa ekugadzira mapuranga, kugadzirisa kwechokwadi, SNMP uye NTP
Gadzirai zvirongwa zvehurumende
Ronga uye ushande uni-cast RPF (Reverse Path Kutumira)
Tungamira kutora mashoko ekudzokorora uye rekodhi rutsigiro rweJunos gadgets
Kuderedza Junos OS zvakabudirira
Kutarisa kutungamirira mabasa, kumira kwakasimba, OSPF uye mazano ekutungamirira
Gadzirai mitsara yemoto
Inventive Technology Solutions gives JNCIA Training in 9 areas in India - Bangalore, Chennai, Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Noida and Pune.
Iyi yedzidzo yeJunos yakakwana kune vechidiki kana masangano ekugadzirisa nyanzvi dzinoda kukura kunzwisisa kwavo muna Junos OS, Juniper Networks zvinokosha uye kutungamirira pfungwa.
Pamusoro pezvikamu zvitatu zveJonos Tracks pasi, JNCIA-Junos ndiyo inofanirwa kukodzera Mitatu yeJunosos:
Sangano rinonyanya kukosha Routing uye Kuchinja: Iyi inzira ndeyevaya vanoshanda nesheyo kana kugadzirira kurongwa muJuniper Networks vachitungamira pamwe nekushandura mamiriro ekupedzisira kumagumo mukati memusangano wekubuditswa kwemashoko kana Fortune 100 Enterprise environment.
Kuita Routing uye Kuchinja: Iyi inzira ndeyevaya vanoshanda zvishomanana kuburikidza nemamiriro ekutengeserana emabhizimisi anounza uye anogadzira Juniper Networks mitsva yakagadzirirwa maitiro umo LAN neWAN inoshandura uye kushanduka kunogara.
Junos Security: Nzira iyi inoratidzirwa kune vanhu vanotsanangura uye vanochengetedza mifungo yakachengeteka yaJuniper Networks.